Xirfadlayaasha PR: Lagama dhaafo CAN-SPAM | Martech Zone
Xirfadlayaasha PR: Lagama dhaafo CAN-SPAM
Sharciga CAN-SPAM wuxuu soo jiray tan iyo 2003, laakiin xirfadlayaasha xiriirka dadweynaha sii wad inaad dirto emayl ballaaran maalin kasta si kor loogu qaado macaamiishooda. Sharciga 'CAN-SPAM' wuu cad yahay, wuxuu daboolayaafariin kasta oo elektaroonig ah ujeedadeedu ugu weyni waa xayeysiinta ganacsiga ama dhiirrigelinta badeecad ama adeeg ganacsi."
Xirfadlayaasha PR ee u qaybinaya war-saxaafadeedyada boggaga wax ku qora ayaa xaqiiqdii u qalma. The Tilmaamaha FTC waa u cad yihiin emayllada ganacsiga:
U sheeg qaatayaasha sida ay uga baxaan ka-helitaanka emaylka mustaqbalka adiga. Farriintaadu waa inay ku jirtaa sharraxaad cad oo muuqata oo ku saabsan sida qofka qaataha ah uu uga bixi karo inuu email ka helo adiga mustaqbalka. Ku farsamee ogeysiiska hab u fudud qofka caadiga ah inuu aqoonsado, wax u akhriyo, una fahmo.
Maalin kasta waxaan ka helo e-mayl khubarada xiriirka dadweynaha iyo iyagaba marna leedahay farsamo kasta oo ka bixitaan ah. Markaa… Waxaan bilaabayaa la xisaabtankooda iyo diiwaangelinta an Cabashada FTC emayl kasta oo aan helo oo aan lahayn farsamo ka bixitaan. Waxaan kugula talin lahaa dadka kale ee wax qora ee wax qora. Waxaan u baahanahay inaan la xisaabtano xirfadlayaashan.
Taladayda ku wajahan Xirfadlayaasha PR: Ka hel adeeg bixiyaha emaylka oo aad si toos ah uga maamusho liisaskaaga iyo farriimahaaga. Waxba igama gelin in la ii soo diro emayl khuseeya, laakiin waxaan jeclaan lahaa fursad aan kaga baxo kuwa aan khuseyn.
Tags: karaa-spamemaylka garoonkaboostada garoonkaboorarprpr garoomadaxiriirka dadweynahaspam
Xafiiskaaga, Cinwaankaaga, Magacaaga
Marnaba Ma Fudud Sida Taageerayaasha Iyo Kuwa Raaca
Apr 21, 2010 at 8: 27 AM
Waxaa jira su'aal gooni ah halkan, taas oo ah, "maxay dadkaasi PR u farsameyn la'yihiin garoomo loogu talagalay?"
Aniga oo ah nin PR ah nafsad ahaanteyda (waligeyna kuguma soo dhowaan, in kastoo), waxaan ku ciirsanayaa fikradda ah qaraxyada emaylka tirada badan. Waxqabadka ugu fiican wuxuu sii wadaa inuu ahaado inuu ogaado dhagaystayaashaada iyo inuu sameeyo farsamooyin gaagaaban oo iyaga ka hela, halkii uu ka buufin lahaa oo u ducayn lahaa.
Boostadaadu waxay kuu horseedaysaa su'aal dabagal ah in kastoo - miyay tahay inaan markaa dhigno "Fadlan ii soo sheeg haddii aad jeclaan lahayd inaadan iga maqlin" - xariiq adag dhamaadka e-mayl kasta oo si shaqsi ah loola hadlo
Apr 21, 2010 at 11: 35 AM
Nabade Dave! Uguyaraan, waa inuu jiraa xariijin halkaas. Haddii e-mayl ahaan shaqsi ahaan wax looga qabanayo iyo in kale macnaheedu maahan inaysan ahayn SPAM. Ma jiro tirada liistada 'ugu yar' ee emaylka ganacsiga ku saleysan. 🙂
Ilaa iyo inta aysan aheyn mid shaqsiyadeed oo ay tahay mid dhiirrigelin ah dabiiciyan, waxaan aaminsanahay in xirfadlayaasha PR ay tahay inay u hoggaansamaan.
Apr 21, 2010 at 2: 02 PM
Waxaan u maleynayaa inaad heshay qodob weyn. Waxaad u maleyneysaa in mar uun xirfadlayaasha PR ay baran doonaan inay u baahan yihiin inay suuq geeyaan macaamiishooda iyagoo ku saleynaya cilaaqaad adag halkii ay ka riixi lahaayeen warbaahinta… Waa inay ugu yaraan ogaadaan inaadan ku xanaaqin blogger dhagaystayaal ah 😉
Apr 24, 2010 at 9: 15 AM
Ma jiraa wax diiwaan ah oo ku saabsan inta xadgudub ee Spam-ka ah lagu fuliyay ilaa maanta ganaaxyada la soo ururiyay?
Apr 27, 2010 at 2: 01 PM
U hoggaansamida 'CAN-SPAM' waa inay noqotaa bar fudud oo laga gudbo, laakiin waxaa jira culeysyo gaar ah oo ku saabsan nidaamka PR ee caadiga ah haddii aad dhaqan geliso u hoggaansanaanta runta ah. Ku darista cinwaan ka saarid la'aanta iyo cinwaankaaga jireed waa inuu kuu helaa inta badan meesha aad rabto inaad joogtid qof walbana wuxuu ku qanacsan yahay PR. Si kastaba ha noqotee, farsamo ahaan hoos yimaada CAN-SPAM, mar haddii qof iska diiwaangeliyo marna uma soo diri kartid iimayl mar kale, illaa ay dib uga noqdaan mooyee. Waxaad u tixgelin kartaa macaamiisha kala duwan inay yihiin "khadad ganacsi oo kala duwan" sida ku xusan Sharciga weriye ahaan wuxuu u dili karaa sheeko ku saabsan hal macmiil , laakiin tixgeli sii deyntaada qashin kale. Sidoo kale, wakiil ahaan (u shaqeynaya sidii daabacaad ahaan) xayeysiiyaha, waxaad u baahan laheyd inaad la wadaagto waxyaabaha aad ka gaabisay xayeysiiyaha (macmiilkaaga) si aysan ugu dirin cinwaanka emaylkaas mar labaad oo dhibaato ku ah nidaamka PR. Waxaad sidoo kale ku doodi kartaa inaadan ka iibinayn sheyga suxufiga wariyaha macaamilka ugu dambeeya, markaa farsamo ahaan waxaad u direysaa emayl macluumaad ama macaamil ganacsi ah. Haddiise qof daabaco macluumaadka xiriirka ujeeddadiisuna tahay inuu helo war-saxaafadeedyo, waxaa jira oggolaansho maldahan. Boodhadhka halkan ku yaal ayaa sax ah inay ku saabsan tahay beegsiga iyo inta badan muhiimadda ay leedahay wariyaha. Spam wuxuu kujiraa isha qofka arkaya. Kaliya madadaalo fikradaha CAN-SPAM ee maalinta!
Apr 27, 2010 at 2: 10 PM
Todd - Waan ogahay inay jiraan in ka badan 100 dacwad oogis ah Can-Spam. FTC-da ayaa dacweyn kara sidoo kale State AG's, iyo ISP-yada sida AOL ayaa ku dacweyn kara Can-Spam. Marka shirkadaha sida Microsoft waxay ku guuleysteen waxyeelo aan badnayn oo ka timid dambiilayaal dambiilayaal ah waxaanan arkay FTC oo meel kasta uga jirta $ 55,000 illaa $ 10 milyan. Facebook wuxuu helay abaalmarinta ugu weyn ee soo socota oo ku dhow $ 80 milyan. Wareegtada ayaa ah in inta badan abaalmarinnada aan waligood la ururin. Sidoo kale baaritaano badan ayaa ku dhamaada degsiimooyin iyadoo aan la helin war-saxaafadeed, sidaa darteed tirada dhabta ah ee talaabooyinka fulinta waxay umuuqataa kuwa aan lasoo koobi karin. Xaqiiqdii waxaan doonayaa inaan weydiiyo xafiiskooda macluumaadka dadweynaha arintan oo aan arko waxa aan qodan karo. Farxad!